Momba anay - Henzhen Ronghua Technology Co., Ltd.
Shenzhen Ronghua Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2013, dia mpanamboatra manokana amin'ny R&D, fanaingoana, famokarana, varotra ary serivisy fakantsary fakan-tsary, modely fakan-tsary USB, lantira ary vokatra hafa.
Nahazo mari-pahaizana ISO9001, CE, ROHS, UL ary SGS ny orinasa. Ny vokatra dia tsy amidy tsara any Chine ihany, fa aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro koa, ao Eropa, Amerika ary Azia atsimo atsinanana. Mampihatra fifehezana kalitao henjana amin'ny rohy rehetra izahay, manomboka amin'ny fividianana akora, fanodinana, fanandramana ka hatramin'ny fonosana. Ho fanampin'izany, manolo-tena ihany koa izahay amin'ny famolavolana vokatra vaovao hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Manaiky ny kaomandy OEM sy ODM ihany koa izahay, ary manome serivisy mijanona iray ao anatin'izany ny PCB, PCBA, SMT patch, fanodinana solosaina aorian'ny PCBA, fanodinana fitaovana, fitaovana OEM, baiko mifanandrify BOM, fandaharana ary fitsapana.
Birao eo alohan'ny orinasa
Fanamarinana sy kalitao
Ny mpiasanay dia manana traikefa ary manolo-tena amin'ny fisafoana kalitao hentitra ary serivisy ho an'ny mpanjifa mieritreritra. Mampiasa fitaovana mandeha ho azy izahay mba hifehezana henjana ny kalitaon'ny vokatra ary hampiharana fifehezana kalitao henjana amin'ny rohy rehetra manomboka amin'ny fividianana akora, fanodinana, fanandramana ka hatramin'ny fonosana. Manaraka ny fitsipika mifehy ny tombontsoa izahay ary mankafy laza tsara eo amin'ny mpanjifanay satria manome serivisy tonga lafatra izahay, vokatra avo lenta ary vidiny mifaninana.
Sehatra orinasa efatra
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana modules fakantsary FPC, modules fakantsary SENSOR, modules fakantsary USB, modely fakan-tsary binocular, modely fakan-tsary AHD, modules fakantsary fanao, LENS, sns.
Fampiharana: trano marani-tsaina, Internet misy zavatra, fakan-tsary finday, fitaovana fitsaboana, endoscope kapsily, fisedrana ny mari-pana amin'ny vatana, fanekena tarehy, robot maranitra, drôna, fiara, fakantsary haingam-pandeha, kilalao, DV, MP4, MID, scanner kaody QR, kaody bar scanner, fakantsary fanaraha-maso ao amin'ny sehatry ny fiarovana sy sehatra hafa.
Miaraka amin'ny tsipika famokarana SMT haingam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, sy fitaovana fanandramana mandeha ho azy isan-karazany, azo tanterahina ny fametrahana azy mandeha ho azy na dia 0201, 0402, BGA, FBGA, QFN, QFP fonosana, na karazana singa mifangaro miendrika endrika sy modely fifandraisana izany. , izay afaka manome fahafaham-po ny famokarana sy ny fikarakarana takiana amin'ny vokatra samihafa.
Izahay dia mifantoka amin'ny famokarana haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny lavaka FR4 tokana PCB, takelaka boribory misy sisiny roa, tabilao misy tariby maromaro, substrat aluminium alimina, tabilao miovaova FPC, tabilao malefaka sy hentitra ary tabilao PCB avo lenta.
Miaraka amin'ireo mpamatsy kaoperativa maharitra, afaka mividy vokatra betsaka izahay mba hampihenana ny vidiny. Fantatsika ny fiantraikan'ny singa samihafa amin'ny kalitaon'ny fanodinana vokatra, ary mametraka rafitra fanaraha-maso henjana sy fanandramana hifehezana ny kalitaon'ny fikarakarana, fatiantoka ary risika hafa, ary hampihena ny fatiantoka anananao.
Mamorona lanja ho an'ny mpanjifanay!
Omeo vokatra mandroso amin'ny teknolojia!
Amporisiho amin'ny fotoana iray ny fitomboana sy ny tombom-barotra!
Mampiroborobo ny fandrosoan'ny orinasa mitohy ary mamorona tontolon'ny asa tsara ho an'ny mpiasanay!